Sex Education Archives » Lifestyle Myanmar
by Naung Naung March 6, 2018 0117
ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုတွေကို ကြည့်ရှုခြင်းဟာ မှန်ကြောင်း၊ မှားကြောင်းကို မဆိုလိုပေမယ့် ကြည့်ရှုသူနဲ့ သူ့ရဲ့ချစ်ရတဲ့သူအပေါ်မှာတော့ မကောင်းတဲ့သက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဗီဒီယိုတွေကို ကြည့်ရှုခြင်းဟာ အပန်းဖြေခြင်းတစ်မျိုးလို့ ယူဆလို့မရပဲ စွဲစွဲလန်းလန်း ကြည့်ရှုတတ်ခြင်းကြောင့် အနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေ ကြုံတွေ့ရနိုင်တာကြောင့် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်စေတတ်တယ်ဆိုတာကို Lifestyle Myanmar ပရိသတ်တွေအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အသိတွေထဲမှာ အဆိုပါဗီဒီယိုကြည့်တတ်သူတွေကို
အသက်၄၅နှစ်အရွယ် Masayuki Ozaki ဆိုတဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတစ်ယောက်ဟာ လှပကျော့ရှင်းတဲ့ ချစ်သူကောင်မလေးတွေ အမြဲတမ်းဝိုင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ချစ်သူတွေဟာ သက်ရှိလူသားမဟုတ်ပဲ Mayu လို့ခေါ်တဲ့ ဂျပန်ကာတွန်းဇာတ်ကောင်ကို ကွဲပြားခြားနားတဲ့ ပုံစံတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ စီလီကွန်အရုပ်မတွေဖြစ်ပါတယ်။ Ozaki ဟာလူအစား လိင်အရုပ်မတွေနဲ့ အတူနေထိုင်ဖို့ရွေးချယ်သူအဖြစ် ဂျပန်နိူင်ငံမှာနာမည်ကြီးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မှာမိန်းမနဲ့ ကလေးရှိနေသော်လည်း Ozaki
Porn Platform ကနေ xHamster နဲ့ IDOLL ကုမ္ပဏီနှစ်ခု ပထမဦးဆုံး ပူးပေါင်းပြီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရုပ်များကို ထုတ်လုပ်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် အခုလို စီလိကွန်အရုပ်ကို ပထမဦးဆုံး ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအရုပ်မရဲ့ အမည်ကိုတော့ xHamsterina လို့ အမည်ပေးထားပါတယ်။ သူမရဲ့
by OMCTC June 5, 2017 020
Sex Doll အရုပ်ကိုလှပပြီး ဆွဲဆောင်မူရှိရုံသာမက ယခုအခါစကားပြောနိုင်စွမ်းရည်ကိုပါ ပြုလုပ်နေကြပါပြီ။ စက်ရုပ်အမှန်တစ်ကယ်နားထောင်ရန်နှင့်လူတစ်ယောက်ကဲ့သို့ စကားပြောနိုင်စွမ်းရှိမှ ယောက်ကျားများက ပိုပြီးကျေနပ်မူရှိမှာပါ။ Sex Doll အရုပ်များကို ပျော်ရွင်ခြင်း၊ ရှက်ခြင်း၊ ကာမဂုဏ်၊ ရယ်စရာ၊ မနာလိုခြင်း၊ သုန်မှုန်ခြင်းစသည့် စရိုက်မျိုးစုံကို ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးလိုက်လျောညီထွေအောင် ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Real Dolls ကိုဖန်တီးသူ
အခုရေးထားတာက Australia Child abuse Royal Commission ကနေ မိဘ ဆရာတွေ တခြားတာဝန်ရှိသူတွေ သတိထားဖို့ထုတ်ထားတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေနှင့် Oprah မှာ Forensic psychiatrist Dr. Michael Welner ပြောထားတာတွေကို မှီကိုးထားတာပါ 1. ကလေးကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ပြင်ဆင်လဲ Australia
ယခုမျက်မှောက်မှာ မိဘတွေအားလုံးက သူတို့ကလေးတွေရဲ့ ဘေးကင်းလုံခြုံ မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး တူညီတဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ဘယ်သူက ယုံကြည်စိတ်ချရတယ်၊ ဘယ်သူက မယုံကြည်ရဘူးလဲ ဆိုတာကို ဘယ်လိုသင်ရမလဲ? ဘာကို သင်ပေးရမလဲဆိုတဲ့ ပြဿနာများကို ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ မိဘတွေက မသေချာမရေရာတဲ့ အခြေအနေတွေကို ဘယ်လိုခွဲခြားမလဲ၊ ဘယ်လိုထိန်းကျောင်းမလဲဆိုတာကို ကလေးတွေကို
Health & Beauty Relationship Sex Education
by OMCTC April 4, 2017 April 4, 2017 014
လိင်ဘဝပိုမိုကောင်းမွန်းဖို့လာအောင် ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေ စားသင့်လည်းဆိုတာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ စတော်ဘယ်ရီ စတော်ဘယ်ရီသီးဟာ ကျန်းမာရေးအတော်များများအတွက် ကောင်းမွန်ပါတယ်။ စတော် ဘယ်ရီသီးမှာ ဖောလစ်အက်ဆစ်၊ဗီတာမင်အီးပါဝင်တဲ့အတွက်အထူးကောင်းမွန်ပါတယ်။ ပိုတက်စီယမ်ပါဝင်တဲ့အတွက် သင့်လိင်ခံစားချက်ကိုမြှင့်တင်ရန်ကူညီပေးပါတယ်။ စတော် ဘယ်ရီးသီးစားသုံးခြင်းဖြင့် လိင်ဘဝကိုတိုးတက်စေပါတယ်။ ၂။ အနက်ရောင်ချောကလက် ချောကလတ်ဟာ လိင်ဘဝပိုမိုကောင်းမွန်ဖို့အကောင်းဆုံးအစားအစာတစ်ခုပါ။ချောကလတ်ဟာ လိင်ခံစားချက်ကိုမြှင့်တင်ရန်ကူညီပေးပါတယ်။ ၃။ ဖရဲသီး ဖရဲသီးသည်လိင်စိတ်ကိုတိုးမြှင့်တင်ရန် ကျော်ကြားတဲ့စူပါအစားအစာများဖြစ်ပါတယ်။